PlugBug, avereno mamerina ny iPad sy ny MacBook-nao amin'ny charger | Vaovao IPhone
Roa ambin'ny folo atsimo no nanomboka nivarotra kojakoja faran'izay mahaliana hahafahantsika manafatra ny MacBook sy ny fitaovana iOS amin'ny fotoana iray.
Na dia azontsika atao aza ny manafatra ny fitaovan'ny iOS amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ao amin'ny port USB laptop, ny marina dia ity vahaolana ity dia haingana kokoa ary mahomby kokoa, indrindra amin'ny tranga iPad.
Ny PlugBug dia mifanaraka amin'ny charger MacBook rehetra eny an-tsena, tena mora ny fametrahana azy ary miavaka ny endriny noho ny lokony mena manaitra.
Raha sanatria ka tsy te-hanome vola ny MacBook izahay, ny PlugBug dia miasa irery ihany koa ary mitokana irery mba hanomezana fahafaham-po ny fitaovana iOS.
Ity fitaovana ity dia mitentina $ 34,99 ary efa azo vidiana mivantana amin'ny alàlan'ny Pejy ofisialy roa ambin'ny folo atsimo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » PlugBug, avereno mameno ny iPad sy ny MacBook-nao amin'ny charger iray ihany
Applocker: tenimiafinao ny rindranasao (Cydia iOS 5)